Iwe Wako Wakapiswa Zvemukati Idea Inoshanda? 5 Nzira dzekuziva | Martech Zone
Iwe Wako Wakapiswa Zvemukati Idea Inoshanda? 5 Nzira dzekuziva
Chishanu, June 20, 2014 Chishanu, June 20, 2014 Kelsey Washington
Zvinyorwa zvakagadzirwa hazvo saizi imwe inokwana zvese. Izvo zvinoshanda kune rimwe brand zvinogona kusashandira vese, uye zvakanaka kuti uzive kana yako yemukati pfungwa inogona kushanda usati wadira zviwanikwa mukuzviita. Chikamu Chechishanu yauya nemibvunzo mishanu yaunogona kuzvibvunza iwe pamwe nechikwata chako kuti uone kana mazano ako akajeka achashandura kubva mukamuri yemusangano kuenda kune vako vateereri uye pakupedzisira, kubudirira kwechiratidzo chako.
Chinhu chekutanga chekutarisa ndechekuti vateereri vako vanofarira here kana kuti kwete. Ndezvipi zvavanofarira kukombamira uye pfungwa yako inoenderana here? Iwe une zano rekuendesa izvo zvirimo kune vateereri vako? Ronga kushandisa mapuratifomu avanofarira. Zvinokubatsira here kuenda kumberi kunosangana nezvinangwa zvako zvebvumirano? Uku kunogona kuve mutsauko pakati penyaya yakanaka nepfungwa yakanaka. Iwe unogona kuona yese mishanu mibvunzo mune infographic pazasi.
Ndichiri kugumburwa? Bvunza nyanzvi.
Tags: b2cyakarongedzwa zvemukatiContent Marketinginfographicmobile marketingzvemukati zvemukati
2014 Fomu Shanduko Rondedzero: Benchmark uye Kuvandudza Yako Fomu Shanduko